किन घट्दैछन् स्मार्ट टेलिकमको फोरजी सेवाका प्रयोगकर्ताहरु ? - Technology Khabar
» किन घट्दैछन् स्मार्ट टेलिकमको फोरजी सेवाका प्रयोगकर्ताहरु ?
किन घट्दैछन् स्मार्ट टेलिकमको फोरजी सेवाका प्रयोगकर्ताहरु ?
स्मार्ट टेलिकमको फोरजी प्रयोगकर्ता घटेका छन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको कात्तिक महिनाको एमआईएस (म्यानेजमेन्ट इन्फरमेसन सिस्टम) प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा स्मार्ट टेलिकमको फोरजी प्रयोगकर्ता घटेका हुन् ।
असोज महिनामा स्मार्ट टेलिकमको प्रयोगकर्ता दुई लाख दुई हजार ६७१ थिए भने कार्तिकमा घटेर एक लाख ९९ हजार पुगेको छ । दुई हजार ९१० जनाले घटेका छन् । उक्त अवधिमा १.४३ प्रतिशतले स्मार्ट टेलिकमको फोरजी ग्राहक घटेका हुन् ।
साउन र भदौमा स्मार्ट टेलिकमका फोरजी प्रयोगकर्ता एक लाख ८२ हजार ५४५ थिए । साउनदेखि भदौमा एक जना पनि फोरजी ग्राहक नबढेको स्मार्टले असोजमा भने २० हजार १२६ फोरजी ग्राहक बढाएको थियो ।
तर असोज महिना यता भने फोरजी ग्राहक घटिरहेका छन् ।
असोजमा स्मार्ट टेलिकमका भ्वाइस प्रयोगकर्ता २२ लाख एक हजार १८२ थिए भने कार्तिकमा त्यो संख्या बढेर २२ लाख ३५ हजार २०१ पुगेको छ ।
स्मार्ट टेलिकमले विगत लामो समयदेखि सरकारलाई रोयल्टी र नविकरण दस्तुर तिरेको छैन । स्मार्ट टेलिकमलाई अधिग्रहण गर्ने सरकारी योजना रहेको छ । यसले गर्दा पनि स्मार्टका प्रयोगकर्ता अन्य सेवा तिर मोडिएको अनुमान गरिएको छ।
स्मार्ट टेलिकमले गत चैत मसान्तसम्ममा एक अर्ब २० करोड रुपैयाँ भन्दा बढि रकम सरकार र प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने थियो । अहिले सो रकममा थप जरिवानासमेत जोडिनेछ।
यसअघि कम्पनीले चैतमा तोकिएको अवधिमा नवीकरण दस्तुरको किस्ता रकम तिर्न नसक्ने भन्दै म्याद थपको माग गरेको थियो । जसमा सरकारले वैशाख मसान्तसम्मको अवधि दिएको थियो । तर लकडाउनको कारण सो अवधिमा पनि रकम तिर्न नसक्ने भन्दै स्मार्टले दोस्रो पटक म्याद थपको लागि निवेदन दिएकोमा सरकारले दोस्रोपटक भदौ मसान्तसम्मको म्याद दिएको थियो ।
पटक पटक म्याद थप गर्दा पनि स्मार्ट टेलिकमले रोयल्टी बुझाउन नसक्ने देखेर सरकारले अहिले आफ्नो दायित्वअन्तरगत राखेर अधिनमा लिने भएको छ । यसका लागि गत भदौ २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले फागुनपछि सरकारको अधिनमा लिनेगरि कानून बनाउन निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको बैठकले ३ बुँदे निर्णयसहितको निर्देशन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई दिएको छ।
जसअन्तरगत फागुन मसान्तपछि स्मार्ट टेलिकमलाई अधिनमा लिने गरि कानून निर्माण गर्न भनिएको छ।
सरकारले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २० बमोजिम प्राधिकरणलाई निर्देशन दिनसक्ने आधारलाई टेकेर स्मार्ट टेलिकमको जिम्मेवारी लिनेगरि तयार रहन निर्देशन दिएको हो । स्मार्ट टेलिकमलाई फागुन मसान्तसम्मको लागि अन्तिम पटक बक्यौदा तथा रोयल्टी तिर्ने म्याद दिइएको छ । सो अवधिमा पनि स्मार्ट टेलिमकले रकम भुक्तानी नगरे सरकारले हस्तक्षेप गरि आफ्नो अधिनमा लिनेछ ।
त्यसैकारणले पनि स्मार्टका फोरजीका ग्राहकहरु घटेको अनुमान गरिएको छ ।